I-Studio 'Zonnebloem' - igaraji ephakathi + yokupaka - I-Airbnb
I-Studio 'Zonnebloem' - igaraji ephakathi + yokupaka
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDesislava
Isitudiyo esinelanga kunye nesipholileyo (45 sq.m.) esikwisakhiwo esitsha kraca entliziyweni yeSofia.
I-terrace enkulu ibonelela ngembono ekhethekileyo kunye nenqabileyo kakhulu yentaba kule ndawo isembindini. Ahh, imbono, imboniselo yenye yohlobo <3
Le ndlu ibekwe kumbindi wesithili saseReduta kufutshane neMall Serdika. Iziko lembali yimizuzu eyi-15 yokuhamba umgama, intaba yeVitosha yimizuzu eyi-10 yokuqhuba ngemoto / iteksi kunye neSikhululo seenqwelomoya yi-6km okanye i-10 imizuzu yokuqhuba ngemoto / iteksi.
I-studio ye-studio kumgangatho ophezulu wesakhiwo se-6th floor kunye nesango, elihlala litshixiwe ngamaxesha onke.Izolile kwaye inoxolo, indawo ixhotyiswe ngebhedi ephindwe kabini, ikhitshi eline-oveni yesitovu, ifriji kunye nomatshini wokuhlamba.Iindwendwe zingonwabela iWiFi yasimahla kunye nomabonakude wentambo kunye nokuhlamba ilanga ngencwadi kwithafa elikhulu.Isitudiyo sijikelezwe ziivenkile, iivenkile ezinkulu, iivenkile zokubhaka kunye neendawo zokutyela njengoko isithili saziwa njengeziko labarhwebi. Indawo yokupaka yasimahla njengongezelelo oluhle.
4.85 · Izimvo eziyi-242
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi242
Indawo endihlala kuyo sisithili esidala esinezindlu ezininzi. Ngokujonga indawo yayo esembindini, zininzi iindawo zokubhaka, iivenkile zokutyela kunye neevenkile ezinkulu ezisebenza 24/7.
Umbuki zindwendwe ngu- Desislava
Zindwendwe ezithandekayo, nceda kubalulekile UKUNXIBELELANA ukuba kukho into ekukhathazayo ngexesha lokuhlala kwakho okanye unemibuzo.Unxibelelwano sisitshixo ekusombululeni nayiphi na ingxaki :) Ndifumaneka ukusuka kwi-8 ukuya kwiiyure ezingama-23 ngefowuni okanye ngomyalezo obhaliweyo kwiimfuno zeendwendwe zam.
Zindwendwe ezithandekayo, nceda kubalulekile UKUNXIBELELANA ukuba kukho into ekukhathazayo ngexesha lokuhlala kwakho okanye unemibuzo.Unxibelelwano sisitshixo ekusombululeni nayiph…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sofia